Maxkamada Ciidamada Qalabka sida oo xukuno ku riday Afar Eedeysane oo lala xiriirinaayayAl shabaab – Radio Muqdisho
Maxkamada Ciidamada Qalabka sida oo xukuno ku riday Afar Eedeysane oo lala xiriirinaayayAl shabaab
Maxkamada Ciidamada qalabka sida ayaa xukun ku riday Rag ka tirsan Maleeshiyaadka nabad diidka ah ee Al shabaab ku waaoo loo hayso in ay ka dambeeyeen Qaraxyo ka dhacay Magaalada Muqdisho ee Caasimadda Dalka ayna wax ku noqdeen Shacab Soomaaliyeed.
Dacwadaha afartan qof uu xafiiska xeer ilaalinta guud ee Maxkamada Ciidamada qalabka sida kusoo oogay ayaa soo maray heerar kala duwan ,waxaana dacwadooda ay soo martay ilaa sedax dhageysi maxkamadeed oo intooduba ahaa kuwo furan oo dadweynuhu ay si furan uga soo qeyb galayeen,sidoo kale eedeysanayaasha waxaa u doodayay abuukaatayaal ama qareeno si aysan u dhicin duudsi cadaaladeed eedeysanayaashuna ay u helaan hufnaan cadaaladeed oo ay ku qanci karaan.
Xafiiska xeer ilaalinta guud ee ciidamada qalabka sida ayaa maxkamada hor keenay cadeymo isugu jira qoraalo iyo muuqaalo uu xafiiska xeeer ilaalinta u cuskaday in ay cadeymo u yihiin eedaha loo heysto.
Gudoomiyaha maxkamadda darajada 1-aad ee ciidamada qalabka sida gaashaanle sare xasan cali nuur shuute ayaa xukunka ku dhawaaqay.
Halkaan hoose ka dhageyso Codka Maxkamadda:
Shirka Amniga Qaranka oo maanta la soo gaba gabaynaayo